Ukuqanjwa okungu-10 okungaguqula isimo semvelo - Afrikhepri Fondation
Funda: 10 amaminithi
Amandla we-photovoltaic, eziphehla ugesi, izimoto ezi-hybrid… eFrance, lezi zinto ezintsha azikho ndawo. ESilicon Valley, sekuvele kukhona, futhi abacwaningi basebenzela “ubuchwepheshe obuluhlaza” obusha okuhloswe ngabo ukunciphisa ukusetshenziswa kwethu kagesi. URue89 wenza iqoqo elingaphelele lezinto ezimangalisa kakhulu, ezitholwe encwadini ethi "Green Revolution: Investigation in Sillicon Valley" ngu UMichel Ktitareff, ebonakala ngo-Okthoba 7 eDunod.
Ama-satellite ukushisa umhlaba
Noma ngabe kusho ukusebenzisa amandla elanga ukudala ugesi, ungahle uwuthole emthonjeni. ISolaren yokuqalisa, esevele ikhethekile kuma-photovoltaics, ngakho-ke ihlela ukuhambisa, ngo-2016, iziphuphutheki ezinamapaneli elanga.
Umqondo awukona ukusebenzisa ama-microwave wesiteshi sasemkhathini samazwe, kepha ukuxhuma ama-panels ku-hemisphere yethu nge-wave yomsakazo. Isiteshi somhlaba-ke sinesibopho sokukuguqula kube ukushisa, bese kuba ugesi.
Ama-Nano-sensors ukusindisa amanzi
Ukuvuza kwamanzi kuyisitha semvelo njengoba kunjalo nangezikweletu. Ukuze kulondolozwe imithombo yamanzi angenasawoti eplanethi, abacwaningi bakha izinzwa ezingatholakali ngeso lenyama ukuze zifakwe enhliziyweni yamapayipi.
Ngenkambinkimbi eyinkimbinkimbi eyenza izwele ukuzwakala kwemisindo, lezi zinzwa ziyakwazi ukudlulisela kolwazi olubulalayo mayelana nokuhluka kokusetshenziswa kwamanzi. Ideal uma kwenzeka ukuvuza.
Lezi zinzwa zihambisana ne- Ama-Smart grids (ngokweqiniso, "ama-grid smart"), lawa mathuluzi asebenzisa amasistimu wolwazi anjenge-Intanethi ukulawula izinhlobo ezahlukene zamanethiwekhi, kungaba ngogesi, umgwaqo noma amanethiwekhi ekhompyutha.
Enye indawo yokusebenzisa "ama-smart techs" ("ubuchwepheshe obuhle"), imigwaqo emikhulu yaseCalifornia, lapho kufakwa khona iningi lezinzwa emizileni. Phakathi kokunye, bakwenza ukubala inani lezimoto ezidlulayo, futhi ngaleyo ndlela basungule imephu efanelekile yomgwaqo emkhakheni owemboziwe.
Ixhunywe ngesathelayithi ebhokisini elikhethekile elifakwe kudeshibhodi yemoto, ingaqondisa umshayeli ngesikhathi sangempela uma kwenzeka kuba nethrafikhi, ingozi noma okunye okunjalo. Ekugcineni, lokhu kudala ukonga amandla amancane ... okuphindaphindwe ngenani elikhulu kakhulu labasebenzisi.
Ama-panels anobuchopho futhi obumbene afana nephepha
Lezi zindaba zazenze umdlandla omkhulu: Google ukumboza ngokuphelele uphahla lwakhe ama-solar panel, ngo-2007. Ingabe uyoke akwazi ukumboza amakhompyutha akhe ngawo? Sngikholwa ukuthi inkampani yeNanosolar (noma izimbangi zayo iMiasolé neSolexant), kungenzeka.
Lawa ma-start-up afuna ukunciphisa ukushuba kwamapaneli ngangokunokwenzeka (lawo athengiswayo namuhla angafinyelela cishe ku-1 cm) ngenxa yobuchwepheshe be-CIGS ("ngethusi, i-indium, i-gallium ne-selenium", amagama ezinto zalokho okuqukethwe. ). Into yokugcina ibingeke ibe mkhulu kunephepha.
Uma bekwazi ukukhiqiza lokhu kusungulwa ngezinga elikhulu, okungakaqiniseki, lapho-ke kuzokwazi ukunamathisela lawa mafilimu cishe yonke indawo njenganoma iyiphi ifilimu epulasitiki. Kukhethwa ngaphandle kwendlu yakhe.
“Off shore” amaseva ekhompyutha
Ngokocwaningo lwaseMelika, amaseva ekhompyutha (noma "izikhungo zedatha") asetshenziselwa ukugcina idatha yedijithali isebenzisa u-1,5% kagesi ophelele wezwe. Ikhasimende elikhulu kunawo wonke: iGoogle enkulu, enombolo yamaseva ayo ilinganiselwa esigamu sesigidi (irekhodi lomhlaba), isabalale emhlabeni wonke ngokusho kwe-website ye-pingdom.com.
Esikhundleni sokuvumela lezi zikhungo ukuba ziqongelele emaphethelweni amadolobha, njengoba kunjalo manje, iGoogle ingahlose "ukwakha izikhungo zayo ezilandelayo zedatha ezindaweni lapho zingaxhuma khona kalula emandleni avuselelekayo baqinisekise izidingo zabo zikagesi ”, ngokusho kombhali wencwadi.
Ngakho-ke ngokwemvelo bacabanga ngolwandle. Kumiswe amashumi amakhilomitha ambalwa ukusuka ogwini, amaseva ayedonsa amandla abo emandleni olwandle, okufana nomoya ophephela.
Insimbi olwandle ukuze imunce i-CO2
Ukubamba i-CO2 eyeqile emkhathini, i-Climos eqinile iphakamisa ukukhipha amathani othuli lwensimbi olwandle. Lokhu kuzoba nomphumela wokukhuthaza ukuthuthukiswa kwe-phytoplanction, ethanda kakhulu isikhutha.
Isekelwa ngabacwaningi abaningi, uClimos ufisa ukwenza lokhu kuhlola ngezinga eliphakathi (10 metres square). Kepha ngalokho kudinga isivumelwano se-International Maritime Organisation, leso sikhungo esingabonakali hhayi okwamanje ukuzimisele ukunikeza
Amandla asenhliziyweni yezintaba-mlilo
Mhlawumbe kungukuqamba okumangazayo kakhulu okwamanje. Ekufuneni ama-enzyme akwazi ukudala amandla avela ku-biomass, iSandia Lab ayitholanga lutho olungcono kunokufaka amapayipi ayo enhliziyweni yezintaba-mlilo.
Unethemba lokuthola lapho izinto eziphilayo eziqukethe i-cellulose, into engaguqulwa ibe ushukela - bese iba yi-ethanol, uphethiloli "oluhlaza", ukwenza "i-cellulosic" ethanol. ISandia Lab empeleni ifuna eminye imithombo yamandla okusanhlamvu okukhiqizwe ukuze kuguqulwe kube yi-ethanol (i-15% yokukhiqizwa kokudla okusanhlamvu e-United States).
I-laboratory ngakho-ke ihlole izinhlobo ezahlukene zokungcola kwezolimo nezinsalela zehlathi. Kodwa njengoba lezi zinto zokwakha zonakalisiwe ngesikhathi sokujikeleza kokukhiqiza, azihlali zisabela kahle ekuguqukeni ezibekwe ngaphansi kwazo. Ngokuphambene nalokho, izinhlayiya eziseduze nentabamlilo zimelana kakhulu.
Lolu cwaningo nokho luphakamisa imibuzo eminingi: uma sicabanga ukuthi umuntu ugunyaza ukuxhashazwa kwezintaba-mlilo ngezinga elikhulu, ingabe imithombo yazo yemvelo ingakwanela ukuphakela izigidi zezimoto?
Izinto zasemakhaya ezixhunywe kwi-intanethi
ngemuva Ifriji efrijini, uyakwazi ukubona ukuthi ama-yoghurt aphelelwe yisikhathi, nansi ifriji eliluhlaza. Le divayisi yahlolwa ngo-2006 ngesikhathi kwenziwa ucwaningo olwenziwa ngaseSeatle. Nge-chip, amathuluzi asendlini (isiqandisi, umshini wokuwasha izitsha, i-microwave, njll.) Axhumene nemitha kagesi, yona exhunywe kwi-Intanethi.
Ngasikhathi sinye, izindlu zikhiqiza ingxenye kagesi wazo uqobo zisebenzisa amandla avuselelekayo (imishini yomoya, amaphaneli elanga, njll.). Kepha manje ake ucabange ukuthi intengo kagesi iyahluka ngesikhathi sangempela kuye ngomkhiqizo. Umphumela: isimo sezulu siba sihle futhi sinomoya, ugesi ungabizi kakhulu.
Kulokhu, umhlali ngakho-ke angavumelanisa ukusetshenziswa kwawo kwamandla nsuku zonke ngokusho kwalezi zinguquko. Ngabe izindleko ziyanda? Ngiphakamisa izinga lokushisa lefriji kancane. Kusazobonwa ukuthi ngabe le nqubo iyasebenza yini ngezinga elikhulu, ikakhulu ezindaweni lapho amandla avuselelekayo engasebenzi kahle.
Amabhaluni esibhakabhakeni ukwenza amandla
Ukuthinta okuncane kwezinkondlo ukuqhubeka nalolu hlu. Iphrojekthi i-Cool Earth Solar, eyisiqalo esivela eSilicon Valley, ihlose ukudala "amapulazi amabhaluni" entanta cishe amamitha ayishumi ngaphezu komhlaba. Begcwele i-helium, bebezoba njalo ihlanganiswe ne-CIGS ifilimu futhi uzobamba ilanga ngokubanzi.
Kodwa ukuqala-up akumeli lapho. Ekugcineni, kuphakanyiswa ukuthumela lawo mabhaluni aphezulu kakhulu, ngaphezu kwamafu, lapho ukukhanya kwelanga kunamandla futhi kuqhubeka njalo. Amabhaluni azoxhunyaniswa emhlabathini, njengamafamu, ngekhebula elilula.
Idivayisi efanayo, ibizwa "I-Zeppelin turbine yomoya", futhi ihlolwe nguMagenn Power ase-Ontario. Isimiso esifanayo, ngaphandle kokuthi ibhola linemibandela.
Izimoto kagesi ekugcineni zisebenza
Beyizinkanyezi ze Indawo yokuphumula yaseFrankfurtIzimoto zikagesi ngonjiniyela abasha be-eco-friendly. Ukuyifaka kabusha, ipulaki elula yanele ukuxhuma ngqo emotweni (kwi-hood noma ezinhlangothini ngokusho kwamamodeli).
Yini entsha eqhathaniswa namamodeli asevele akhiqizwa cishe eminyakeni eyishumi nesishiyagalolunye edlule (yiPeugeot ikakhulukazi)? Ibhethri elihlangene kakhulu elinebanga elide (manje sekungamakhilomitha ayi-150 ngokwesilinganiso) futhi, ngaphezu kwakho konke, elishaja ngokushesha okukhulu, ngaphansi kwehora.
Les imingcele ukushaja okwenziwe yimeya yaseParis mhlawumbe ekugcineni kuzosetshenziselwa okuthile: IToyota imemezela ukukhishwa kwe-Prius ngo-2010 okungaxhunywa kulo mkhakha njengomshini wokuwasha ovamile. Abenzi nabo bavumile ukuthi bazokwamukela imodeli efanayo ye-electrical outlet.
Ukuguquka Okuhlaza: Ucwaningo lwe-Sillicon Valley de UMichel Ktitareff - ed. Dunod - 224p. - € 17 - ikhishwe ngo-Okthoba 7.
Isimangaliso sama-probiotics for impilo enhle
Umlando Jikelele we-Afrika (I-Volume 3)
Imfihlakalo yezingelosi nokubusa kwasezulwini
Ukuthuka kukaCham akwenzekanga